Ar, kuwa wax dooranayo iyo Shacabkoow, Dhaldhalaalka Ololaha Doorashada iyo waxa ka dambeeyo kala fahma=Nasashada Jimcaha.Q-220= | Somaliweyn
Itoobiya oo Faah faahin ka bixisay sababta ay shaqada uga joojisay…
Madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Jacob Zuma oo xabsiga laga sii…
Dowlado Carab ah oo ka horyimid in Israa’iil ay Kursi korjoogto…
Gudoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Galmudug oo kulan la yeshay guddiga doorashada Aqalka…
Three killed in suspected Al-Shabaab attacks in Mandera.
More than 700 migrants saved from Mediterranean this weekend.
Somali PM attends Global Education Summit, meets UK Prime Minister Johnson.
From Somalia to Sonoma: The Last Nomad.
Maxaad ka taqaanaa Janaraal Ceydiid oo 25 sano ka hor maanta…
Suldaankii Islaamka oo Amar siiyay Yurub.=Warbixin Taariikhi ah=
Nasashada Jimcaha. Q- 263: Madaxdeenu mar kasta khalad ay galeen ayeey…
Shan qaab oo loo sugayo amniga doorashada Soomaaliya (Warbixin Muhiim ah).
Vladamir Putin ma wuxuu bixiyay lacagtii lagu iibsaday kooxda Chelsea?
Soomaaliya oo gashay kalmaha ugu horeya tartanka ciyaarta oradka.
Xiriirka kubadda cagta oo ku adkeystay qabashada ciyaarta kama dambeysta ee…
Maxada ka taqaan tirada Soomaalida ee kala meteleysay dalal kale ciyaaraha…
Faah Faahin la xiriirta Khasaaraha ka dhashay qarax lala eegtay Gaari…
Home faallo Ar, kuwa wax dooranayo iyo Shacabkoow, Dhaldhalaalka Ololaha Doorashada iyo waxa ka...
Ar, kuwa wax dooranayo iyo Shacabkoow, Dhaldhalaalka Ololaha Doorashada iyo waxa ka dambeeyo kala fahma=Nasashada Jimcaha.Q-220=
1.Laba Nin oo Doodayo ayaa Odayaal u yimid, xaajadii markii la galay, ayaa Labadii Nin mid ka mid ahi uu aad u carooday, waxa uu dharbaaxay Nin la socday kii ey Murmayeen. Waxaa lagu yiri: Ninkaani dambi kaama galin, kulamana doodin, ee maxaad u dharbaaxday?.
Waxa uu yiri: waxaan is iri, umuu kani xoogaa ka Samir roonyahay.
( Shacabka Masaakiinta ah ee Xamar joogo , waxa loo dharbaaxayo ameey tahay iyagaa Samir roon).
2-Wiil yar iyo Aabihii oo u socdo Masjidka ayaa wiilkii yiri: Aabe maanta Masjidka hana geeyn, waxaa ka buuxo Shayaadiin. Aabihii ayaa yiri: Acuudu Bilaahi, sideed ku ogaatay?.
Wiilkii ayaa yiri: Aabe Marka aan ku jirno Safka Salaadda, soow ima dhihi jirin, Cirbaha Lugaha isku dhaweeya si aan Sheeydaan dhaxdiina u istaagi. Hadda sidii Cudurka “Corona Virus” u yimid soow lama dhihin, kala sikada Hal Mitir, meeqa sheeydaan ayaa na kala dhax gali karto, soow ma dhici karto in Coronaha loogu talagalay in Muslimiinta Cibaadadooda lagu yareeyo ,Sheeydaankana fursad la siiyo. ( F.S: 1aad).
( Aabihii ayaa yiri: Wiilka yar warkisu shaki ayuu igaliyay, Aniga oo safka Salaada ku jiro ayaan ka shakiyaa Qofka dhinaceeyga ah oo Hal Mitir iga fog, Amaa Coronaha loogu tala galay in Muslimiinta la kala fogeeyo, Federaalkana loogu tala galay in Somalida lagu kala fogeeyo).
3- Wiil Ciyaalka Xaafadda ah ayaa u yimid Nin Shiikh ah, kuna yiri: Sheekhoow, Mobile –keyga waxaa ka buuxo Sawirado iyo Video wada ah Anshax xumo, waxaan goostay in aan iska wada tirtiro oo aanan Maanta kadib Daawan, Dambigii horena aan ka toowbad keeno.
Shiikhii ayaa ku yiri: waa Go’aan wanaagsan, Dambigii horena Alla ha kaa cafiyo, ee waxaan ku weeydiiyay ma Sawiradii iyo Video-yadii horaa mise waa kuwii dambe. Wiilkii ayaa yiri: waa kuwii dambe. Shiikhii ayaa yiri: inta aadan tirtirin ii soo tuur si aan u hubiyo in ey yihiin kuwii dambe.
( Maxaa Taliye dheexaa uu Tuug ku yiri: waxaad gashay Dambi weyn, hadiiba aad soo xaday , hanti islaamed, hadda iska keen,Annigana igu soo wareeji iskana bax).
4- Wiil Geel jire ahaa oo Baadiyaha Geel ku ilaalinayay ayaa Gabar kufsaday, qeyladii ayaa waxaa ku soo baxay Wiilka Aabihii. Gabadhii ayuu ku yiri: Gabarteey aan kuu Duceeyee hana ceebeeyn oo Qofna ha u sheegin, haddii la ogaado Adiguna waad ceeboobee, Annagana Qaalin Geel ah ayaa nalaga qaada sida Caadadu tahay, Geel bandanna ma qabno.
Gabadhii ayaa diiday, Codsigii Odaygu uu ku soo celceliyay. Odaygii ayaa Maradii uu duubnaa iska furay, Wiilkiisiina ku yiri: Wiilkeeygoo, Marada ii qabo, marba hadaan Geel noo badbaadeeyn Anna aan Markeeyga dhanaansado. Gabadhii ayaa ku Qeylisy, Adeer waan qarinaa waana iska cafiyay intii Labadiinu aad i wada kufsan leheydeen. ( F.S: 2aad)
( Garta kufsiga ee Magaaladu beryahaan ma fiicnee, ma waxaa soo galay wiilkii Geel jiraha oo Ciidan Noqday, iyo Aabihii oo Qaali Noqday).
5-Sannadkii 2025 ayaa Gabar yari Hooyadeed ku tiri: Hooyo Aabaheey kumuu ahaa? waxa ey ku tiri: Ma xasuusto waxaad Calool gashay Sannadhii Coronaha oo wajiyada Ragana “Face mask” ayaa ku xirnaa. ( F.S: 3aad).
( Amaa Somalidu is weeydiisaa, horta heshiiskaan yaa noo saxiixay, oo la yiraa: ma ogin waxay ahayd waqtigii Tiiha iyo Tala xumada).
6- Baadari kenyaan ahaa oo Dadkiisa wacdinayay ayaa yiri: Nin ayaa dhintay, kadibna waxa uu tagay Qiyaamihii. Waxaa lagu yiri: Maanta Nasiib ayaad leedahay, waa maalin aan la is xisaabineeyn, Jannada iyo Naarta labadaba soo arag , tii aad Doorado ayaa laguu dhaafayaa, waa fursad qaaliya oo nadir ah. Waxa uu yiri: Naarta ha la iigu hor mariyo.
Naartii markii oo tagay ayuu ku arkay sheeydaankii oo si fiican u labisan oo aan leheeyn Dabadii dheereed iyo Labadii Geesood oo Ragga kaniisadu ku sheegi jireen. Waxaa uu arkay dhul wada cagaar ah iyo Miisas ey Cunto badani saaran tahay iyo Rag iyo Dumar Badan oo uu yaqiin oo wada faraxsan, Muskina loo garacayo. Waxa uu yiri: war Ninkii sheedaan ahaay Dambi ayaa laga galay oo xumaan uuna leheeyn ayaa nalooga sheegay.
Kadibna waxa uu tagay Jannadii waxa uu ku arkay Wabiyo Durdurayo, dhul cagaar ah, wixii aad dalbato oo laguu keenayo, Dad qofba uu ku mashquulsan yahay Nimcada la siiyay, Laakin Dadkii uu yaqiin Halkaa waa ku yaraayeenn.
Waxaa lagu yiri: hadda xulo Janno iyo Naar, tii aad ku waari laheyd. Waxa uu yiri: Naarta ha la i geeyo. Markii uu tagay waxa uu arakay Dhul qalal ah Dadkii oo wada gubanayo iyo Sheeydaankii oo Daba dheer iyo geeso leh. Sheedaaynkii ayaa ku yiri: soo dhawaaw .
Ninkii ayaa ku yiri: war halkaani soo ma aheyn ,halkii aan idiinkugu imid oo aad raaxada ku jirteen. Sheeydaankii ayaa ku yiri: Haa, waa isla meeshii, Laakin markii aad noo imaaneeysay, Olole Doorasho ayaa noo socday Xildhubaano ayaana sharaxnaa, Dadkana Dhalanteed ayaan u sheegayay, ee Hadda Doorashadii waa dhamaatay ee Xaqiiqda ku soo dhawoow. ( F.S: 4aad)
(Ar, kuwa wax dooranayo iyo Shacabkoow, Dhaldhalaalka Ololaha Doorashada iyo waxa ka dambeeyo kala fahma).
Previous articleMadaxweyne Trump oo laga helay cudurka Covid-19.
Next articleMuslimiinta India oo haatan qaba cabsi aan hore u soo marin!!!.
Itoobiya oo Faah faahin ka bixisay sababta ay shaqada uga joojisay hay’ado ka howlgeli jiray Tigray.
Madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Jacob Zuma oo xabsiga laga sii daaynayo.
Dowlado Carab ah oo ka horyimid in Israa’iil ay Kursi korjoogto ah ku yeelato ururka midowga Afrika.
Odayaasha Muddulood oo ka digay in la boobo lacag dhawaan lagu qabtay garoonka Muqdisho (VIDEO)
Faqidaada Todobaadka Caalim iyo Somaliweyn ; Ciidamadii lagu tababaraayey Eriteria oo wadadda ku soo jira Maxay tahay sababta aanan u iibsaneyn alaabta Faransiiska lagu sameeyo? Dr Abuu ”Wadankii ayaan dib ugu soo laabtay si aan u hormariyo aqoonta Beeraha iyo waxsoosaarka…” Dowladda FS oo amar culus ka soo saartay howlaha hay’adda Care ka waddo dalka
Qalab digniin ka bixinaya Webiga Shabeelle oo la geeyay degmada Afgooye (Daawo) Muqdisho oo yeelatay nalka Musawaca markii ugu horeysay in ka badan 30-sano kaddib (Video)
Shirkadda Favori iyo shaqaalaha garoonka Aadan Cadde oo qaati kala taagan (Maxaa soo kordhay?)
Daawo markab saliid sida oo ku qalibmay xeebaha Mauritius
Baarlamaanka Soomaaliya oo dood adag ka yeeshay ajande dhif iyo naadir ah Barre Ali Hussein oo ah hanti dhowre ama xisaab hubiye dalka Sweden oo aan ka wareysanay arimahaas
© 2018 Somaliweyn. All Rights Reserved. Design by Shaza Tech